Taageerayaasha Real Madrid oo u codeeyay SHANTA ciyaaryahan ugu qaab ciyaareedka xun xilli ciyaareedkan – Gool FM
Taageerayaasha Real Madrid oo u codeeyay SHANTA ciyaaryahan ugu qaab ciyaareedka xun xilli ciyaareedkan
(Real Madrid) 05 Okt 2018. Wargeyska “Marca” ee dalka Spain oo si aad ah ugu dhow kooxda Real Madrid ayaa daabacay natiijada kasoo baxday cod uruurin uu ka sameeyay Los Blancos, kadib hoos u dhac ku yimid kulamadii ugu dambeeyay ee lasoo dhaafay
Real Madrid ayaa ku fashilantay in wax guul ah ay gaarto 3-dii kulan lasoo dhaafay ay ka ciyaartay horyaalka La Liga iyo tartanka UEFA Champions League, xili sidoo kale ay ku fashilmeen inay dhaliyaan wax gool ah, waxaana kulamadan looga dhaliyay 4 gool.
Ku dhawaad 100,000 taageerayaal ee kooxda Real Madrid ah ayaa ka qeyb qaatay aftidan, taageerayaasha ayaa doortay ciyaartoyda ugu xun ee xilli ciyaareedkan Los Blancos.
Sida laga soo xigtay codka taageerayaasha ee kooxda Real Madrid, ciyaaryahanka ugu xun xili ciyaareedkan Los Blancos ayaa ah weeraryahanka reer France ee Karim Benzema, kaasoo helay 86% codadkii ay dhiibteen jamaahiirta, inkastoo uu yahay xidiga ugu goolasha badan wuxuuna dhaliyay 5 gool.
Daafaca reer Brazil Marcelo ayaa liiskan kasoo galay kaalinta labaad isagoo helay 84%, halka Lucas Vasquez uu helay 71%, Marcos Llorente 58% iyo Marco Asensio 52%.
Dhinaca kale 46% jamaahiirta Real Madrid ayaa waxay u codeeyeen in maamulka kooxda ay mas’uul ka yihiin xaalada adag ay ku jirto Los Blancos, sababa la xiriira in ay fasaxeen Cristiano Ronaldo, isla markaan aysan sameynin saxiixa badalkiisa.
Unai Emery oo bar-tilmaameed ka dhiganaya Éver Banega si uu kaga dhigto badalka Aaron Ramsey
Alexis Sanchez oo ay meel Xun ka mareyso isagoona...!!